Ireo mpanjifa Bittorrent 9 tsara indrindra ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Bit Torrent Is a fifanarahana natao ho an'ny fifanakalozana firaketana an-tsoratra avy amin'ny peer to peer (peer to peer o P2P). Ny protokol Bit Torrent dia novolavolain'i programmer tamin'ny voalohany Bram cohen ary mifototra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana izany.
Ity misy lisitr'ireo mpanjifa Bittorrent tsara indrindra ho an'ny GNU / Linux.
Transmission Mpanjifa P2P maivana, maimaim-poana ary loharanom-baovao misokatra ho an'ny tamba-jotra Bit Torrent. Hita ao ambanin'ny Fahazoan-dàlana MIT, miaraka amin'ny faritra sasany GPL, Ary izany tokoa lampihazo miampita. Manohana ity manaraka ity izy io miasa rafitra: Mac OS X (Interface kakao, teratany), Linux (Interface GTK +), Linux (Interface Qt), NetBSD, FreeBSD y OpenBSD (Interface GTK +) ary BeOS (interface interface). Ny kinova voalohany, 0.1, dia niseho tamin'ny 2005.
Ny fandefasana dia natao ho haingana sy mora. Mampiasa loharanom-pahalalana kely lavitra kokoa noho ny sisa amin'ny mpanjifa Bittorrent (toy ny Vuze). Ity programa tena tsara ity dia mikasa hanome asa mahasoa sy mora ianarana, hialana amin'ny fanakorontanana ny mpampiasa miaraka amina fonosana miasa izay miafara amin'ny fanakorontanana anay fa tsy hanampy. Noho io antony io dia kely kokoa ny fampiasa ao aminy noho ny sisa amin'ireo mpanjifa "feno" kokoa.
Ny fandefasana dia mpanjifa ofisialin'ny fizarana malaza Ubuntu.
Fampidinana sy laharam-pahamehana ireo rakitra
Fanohanana ireo fampitana voaroaka
Fanohanana marobe mpikaroka
Fanohanan'ny Trackers HTTPS
Azureus sy fizarana μTorrent mifanaraka
Sarintany an-tseranana mandeha ho azy (mampiasa UPnP/NAT-PMP)
seranan-tsambo fihainoana tokana ho an'ny rehetra .torrent.
Avereno haingana - miaraka amin'ny cache amin'ny namana
Safidy famafana Auto (zarao angona voafafa)
Auto-fandrarana an'ireo mpanjifa izay mandefa angona tsy marina
Notifications Dock y Hierona
Baraingo azo namboarina
Bara fandrosoana mandroso
Fanavaozana mandeha ho azy mampiasa Sparkle
Mametraka: efa napetraka ao amin'ny Ubuntu izy io. Azo alaina ao amin'ny repositories Ubuntu.
Pejy Ofisialy: http://www.transmissionbt.com/
safo-drano Mpanjifa Bit Torrent , noforonina tamin'ny fampiasana Python y GTK + (amin'ny alàlan'ny PyGTK). Deluge dia azo ampiasaina amin'ny rafitra fiasa rehetra manaja ny fenitra POSIX. Natao hanomezana mpanjifa teratany sy feno ny tontolon'ny birao GTK toy ny GNOME y Xfce. Ny kinova ofisialy ho an'ny Windows dia eo an-dalam-pandrosoana. Mampiasa ny tranomboky C ++ ilay programa libtorrent.
Vao tsy ela akory izay, ny fampandrosoana dia nifantoka tamin'ny fitondrana ny Deluge amin'ny rafitra fiasa hafa. Manomboka amin'ny kinova 0.5.4.1, azo ampiasaina ny Deluge Mac OS X ny alalan ' Macports ary misy installer ofisialy ho an'ny Windows.
Ny safodrano dia natao ho maivana sy malina. Io dia mamela fisintomana marobe amin'ny fotoana iray, mampiseho azy rehetra amin'ny varavarankely iray ihany. Rehefa mila manao zavatra hafa ianao, dia ahenao fotsiny ilay izy amin'ny lovia ary misintona tsara ny riakao nefa tsy manelingelina ny asanao.
Raha ny hevitro, ny mpanjifa Bittorrent tsara indrindra ho an'ny Linux, miaraka amin'ny Transmission (na dia mpanjifa "manify" sy tsy "feno" kokoa aza ity farany).
Ny Torrenting dia tafiditra ao anatin'ny mpanjifa lehibe
Plugins ampiharina ho modules
Deluge dia manohana ireto safidy manaraka ireto:
Fanohanana lehibe an'ny DHT
Fifanakalozana tsiroaroa avy amin'i uTorrent
Fanafenana protokol BitTorrent amin'ny lafiny maro amin'ny ambaratonga maro
Fandraisana an-tanana ny proxy ho an'ny mpiara-mianatra, mpanaraka DHT, ary ny famafazana tranonkala
Tondra-drano tsy miankina
Ankoatr'izay, Deluge dia manana ireto fiasa manaraka ireto:
Ahafahanao misintona rakitra marobe amin'ny varavarankely tokana
Fizarana mialoha sy fizarana feno
Famerana hafainganam-pandeha eran-tany na torrent
Fahafahana misafidy rakitra avy amin'ny riandrano alohan'ny hanombohana ny fisintomana
Safidy ny hametraka ho laharam-pahamehana ireo sombin-drakitra voalohany sy farany amin'ny rakitra, ahafahana mijery ny haino aman-jery
Fahafahana mamaritra ny fampirimana fampidinana manerantany, ary fampirimana fisie feno
Rafitra filaharana ho an'ny fitantanana bandwidth tsara kokoa eo amin'ny fisintomana
Fahafahana mijanona tsy mizara rakitra iray rehefa tratra ny tahan'ny voatondro
Fahafahana hahena amin'ny systray, ary miaro ny lovia ny tenimiafina
Deluge dia manohana rafitra plugin feno, ary maro amin'izy ireo no tafiditra ao amin'ny Deluge, ao anatin'izany:
Mpanafatra lisitra manakana
Kisary hetsika ho an'ny tambajotra
Fanaraha-maso ny fahasalamana amin'ny tambajotra
Mametraka: Azo alaina ao amin'ny repositories Ubuntu.
Pejy Ofisialy: http://deluge-torrent.org/
KTorrent dia mpanjifan'i Bit Torrent for KDE voasoratra anaty C ++ y Qt. Midira ao amin'ny KDE hanesorana, ary ny azy mpampiasa interface tsara dia tsotra. Io no mpanjifa BitTorrent tsara indrindra sy malaza indrindra KDE.
Ny mitovy amin'ny Ktorrent ho an'ny GNOME Safodrano io.
Fampidinana rakitra falehan-driaka amin'ny fomba maromaro.
Fanohanana SOCKS hatramin'ny kinova 5, mamela azy hiasa na dia ao ambadiky ny a Firewall.
Fanafoanana ny fampidinana riaka raha ny habaka ao amin'ny HDD zara raha izany.
Mametra ny hafainganam-pandehan'ny fampakaranao sy ny fisintomanao angon-drakitra, eny fa na dia ny fizarana tsirairay ny renirano tsirairay.
Fikarohana Internet ny fisie torrent amin'ny alàlan'ny motera fikarohana isan-karazany, ao anatin'izany ny ny pejy ofisialy BitTorrent (mampiasa Konqueror ny alalan ' KParts), ary koa ny mety hanampiana ny motera fikarohana anao.
ampy UDP, fampahalalana misimisy kokoa.
Mpandrindra fantsom-pifandraisana azo fehezina ao anatin'ny elanelam-potoana adiny iray isaky ny herinandro.
fanohanana UPnP y DHT.
Fahafahana manafatra fisie alaina feno na ampahany.
Sivana Adiresy IP tsy nirina.
Ahafahanao mikoriana ny riaka.
Fampidinana mandeha ho azy avy amin'ny Feeds RSS.
Pejy Ofisialy: http://ktorrent.pwsp.net/
BitTornado Mpanjifa Bit Torrent. Izy io no mpandimby ny mpanjifa andrana an'i Shad0w. Izy io dia heverina ho mpanjifa mandroso indrindra amin'ity protocol ity.
Ny interface dia mampatsiahy ny BitTorrent tany am-boalohany, fa manampy fiasa vaovao.
Ampidino / ampidino ny fetra
Ataovy lohalaharana ny fisintomana rehefa alaina ny rakitra marobe
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fifandraisana amin'ny mpanjifa hafa
Fanohanana ho an'ny IPv6
Fanohanana PE / MSE
Pejy Ofisialy: http://www.bittornado.com/
qBittorrent dia mpanjifa Bittorrent iray misongadina voasoratra manontolo ao amin'ny C ++ sy Qt4, miorina amin'ny tranomboky libtorrent-rasterbar.
Izy io dia safidy tsara indrindra ho an'ireo mpanjifa mandroso hafa.
Haingam-pandeha izy io ary misy ny fanohanana ny Unicode ary koa ireo fiasa maro hafa toa ny, ohatra, ny milina fikarohana torrent mifangaro.
Sintomy / ampidino ny marobe marobe miaraka
Mamela anao hikaroka lahatahiry sy hisintona ireo riaka rehetra ao aminy.
Fanohanana ho an'ny DHT (Decentralized BT / Trackerless)
Fanohanana ho an'ny µTorrent Peer eXchange (PeX)
Fanohanana ny encryption Vuze
Fandefasana seranan-tsambo UPnP / NAT-PMP
Misoratra anarana amin'ny RSS Feeds
Topazo maso ireo rakitra audio / video rehefa alaina izy ireo
Ferano ny hafainganam-pandeha sy fampidinana (manerantany na torrent x torrent)
Fanamarinana ny Trackers
Sintomy milamina (miadana kokoa fa tsara kokoa raha hizaha rakitra)
Safidio vitsivitsy fotsiny ao anaty falehan-driaka iray no sintonina
Mety hiteraka tondra-drano
Masinina fikarohana torrent mifangaro
Azonao atao ny mampakatra riaka mivantana avy amin'ny URL-ny
Fanohanana ho an'ny mpisolo vava
Fanohanana ireo sivana IP
Mampiseho ny tahan'ny fampidinana / fampidinana ao amin'ny torrent
Web interface for fanaraha-maso lavitra
Fanohanana amin'ny fiteny marobe (~ 25)
Pejy Ofisialy: http://www.qbittorrent.org/
rTorrent dia mpanjifa an'ny Bit Torrent en maody an-tsoratra afaka mifaninana amin'ireo mpanjifa GUI hafa; indrindra ho an'ny fanjifany ambany ny loharano.
Azo alaina amin'ny fizarana linux sy fampiharana ampahany ho an'ny Mac OS.
mifototra amin'ny tranomboky LibTorrent ny rtorrent. Ireo roa ireo dia nosoratana tamin'ny C ++ niaraka tamin'ny fanamafisana ny fahombiazany sy ny hafainganana, raha mbola manome ireo fiasa izay afaka hitantsika amin'ireo mpanjifa manana interface graphique.
Mampiasà URL na làlana iray hanampiana ireo riandrano
Atsaharo / hamafa / hamerina ny ony
Raha azo atao, aondraho / tazomy / hamafa avy hatrany ireo renirano ao anaty lahatahiry manokana
Manohana famintinana tondra-drano azo antoka sy haingana
Mampiseho fampahalalana marobe momba ny mpiara-mianatra sy ny falehan-driaka
aria2 dia fitaovana tena ilaina amin'ny fampidinana rakitra avy amin'ny console.
aria2 dia afaka misintona rakitra iray avy amina loharano sy / na protokol isan-karazany ary manandrana mampiasa ny fantsom-pifandraisana azo avo indrindra Manohana ny HTTP, HTTPS, FTP ary BitTorrent.
Sintomy ny fisie amin'ny alalàn'ny protokol HTTP, HTTPS, FTP ary BitTorrent
Fampidinana misaraka / misaraka
Fanohanana ho an'ny Metalink v3.0
Fanohanana ho fanamarinana PROXY
Fanohanana fanamafisana ny fototra
HTTPS fanamarinan'ny namana mampiasa mari-pankasitrahana CA azo antoka
Taratasy fanamarinana ny mpanjifa ao amin'ny HTTPS
Mametraka Firefox3 sy Mozilla / Firefox (1.x / 2.x) / Netscape Cookies
Fanohanana ny lohateny HTTP
Fanohanana ny fifandraisana maharitra
Ampidino sy ampidino ny haingam-pandeha
Fanitarana ho an'ny BitTorrent
Ovao ny anarana / ovao ny firafitry ny hazo fisintomana
Mihazakazaha toy ny dingana daemon
Fampidinana voafantina amin'ny torrent / metalink marobe
Fanohanana ireo URI voamarika
Tranonkala ofisialy: http://aria2.sourceforge.net/
Vuze, taloha Azureus, dia programa ho an'ny P2P. Izy dia mpanjifa an'i Bit Torrent ary avy any loharanom-baovao misokatra. Mivoatra ao amin'ny Teny fandaharana Java, noho izany dia maro endrika izy, napetraka ny Masinina virtoaly Java. Miasa amin'ny rafitra Mac, ahoana Windows o GNU / Linux.
Ilay mpanjifa an'ny Bit Torrent dia mifanentana tanteraka amin'ny tamba-jotra BitTorrent ary koa misy ny andrasana amin'ny ho avy ao amin'ny p2p, izy Streaming ny horonan-tsary amin'ny famaritana na kalitao avo lenta DVD amin'ny alàlan'ny serivisy votoatin'ny orinasa california Vuze Inc. Amin'ny alàlan'ny tambajotran-tserasera dia mamela ny mpiserasera hifanakalo ny lahatsariny, hanasokajina azy ireo, hanome isa azy ireo ary hanisy fanehoan-kevitra.
Vuze dia novolavolaina tamin'ny Java, Izany dia loharanom-baovao misokatra ary manana fahazoan-dàlana GPL ary azo ampiasaina amin'ny rafitra miasa Microsoft Windows, Mac OS y Linux ary amin'ny ankapobeny, ho an'ny rafitra fiasa rehetra izay afaka mihazakazaka Java sy manohana SWT. Ny sary azureus dia asehon'ny sarin'ny sahona misy poizina Dendrobates azureus, izay mipetraka ao Amerika atsimo, ao amin'ny lovan'i Amazon.
Antontan'isa mandroso - Manome fampahalalana mandroso momba ny fivoaran'ny ony, ny hetsika ary ny famindrana.
Auto Organizer: manasokajy renirano miompana amin'ny karazany fisie (mozika, sarimihetsika, sns.)
Haingam-pandeha: fanitsiana mandeha ho azy ny haingam-pandeha miorina amin'ny "saturation" an'ny tambajotra.
Auto Seeder: masomboly fisie mandeha ho azy mifototra amin'ny atiny torrent sy ny hazo lahatahiry.
Fiaraha-miasa anaty, mampiasa ny protokol cr3.2
Misintona torrents marobe miaraka
Ferana amin'ny fampidinana sy fisintomana riaka, manerantany sy tsirairay
Fitsipika avo lenta momba ny voa
Cache cache azo ovaina
Seranan-tsambo 1 ihany no ampiasainy ho an'ny riaka rehetra.
Manohana ny UPnP (port-forwarding)
Manohana ny fampiasana proxy, na ho an'ny tracker na ho an'ny fifandraisana eo amin'ny mpiara-mianatra
Famintinana fampidinana haingana sy azo antoka.
Mamela anao hametraka lahatahiry fampidinana ary hamindra ireo fisintomana vita
Mamela anao hanafotra riaka avy hatrany amin'ny lahatahiry manokana
Fifanarahana tena azo namboarina
IRC plugin tafiditra ho fanampiana haingana
Tranonkala ofisialy: http://azureus.sourceforge.net/
Torrentflux dia mpanjifa an'ny Bit Torrent vonona hapetraka amin'ny mpizara mampiasa rafitra Linux, Unix y BSD. Raha vantany vao tafapetraka sy mihazakazaka amin'ny lohamilina, ny mpampiasa dia afaka miditra amin'ny fitantanan-draharahan'ny programa amin'ny alàlan'ny tranokala tsotra sy tsotra.
Manohana fiteny sy mpampiasa marobe izy io, ka samy manana ny lisitry ny fampidinana sy ny rakitra ao anaty kapila. Avy amin'ny tontonana fitantanan-draharaha dia azonao atao ny manampy rakitra vaovao amin'ny filaharana fampidinana, manadio ireo alaina, manova ny fari-pitantanana, mivezivezy amin'ny alàlan'ny lahatahiry mpampiasa ... ny asa mahazatra amin'ny mpanjifa rehetra amin'ity karazana ity. Izy io aza dia mamela anao hitady riaka mivantana ao amin'ny mpikaroka ny ankamaroan'ny olona malaza ary ampio amin'ny filaharana izy ireo nefa tsy miala amin'ny tontolon'ny fitantanan-draharaha.
Noho ny toetran'ny torrentflux-b4rt azo zahana, misy karazana fitaovana ankolafy fahatelo sy fitaovana fanampiny azo ampiasaina amin'ny tontonana fanaraha-maso.
Fanohanana ho an'ny Bittorrent, HTTP, HTTPS, FTP, Usenet.
Fanaraha-maso famindrana tafaray
Ajanony / manomboka / averina / hamafana ny fiasan-doha izay misy fiantraikany amin'ny famindrana isam-batan'olona, ​​ny famindrana rehetra na ireo voafantina ihany.
Ovay ny setting "amin'ny sidina", tsy mila hamerina ilay programa intsony: mampakatra sy mampidina ratios, firy ny fifandraisana ampiasaina amin'ny fotoana iray, sns.
Ny famindrana tsirairay dia afaka manana ny fikirany manokana.
Fampisehoana fampahalalana momba ny famindrana: hafainganam-pandeha fampidinana sy fampidinana, fampitahana, isan-jato isan-jato sns.
Firaketana ireo renirano rehetra, izay manamora ny mamantatra sy mamaha ny olana rehefa mitranga izany.
Seeder sy leecher x torrent sary.
fluxcli.php - dikan-torrentflux-b4rt feno ho an'ny terminal / console.
Zahao tsy tapaka ny fahana RSS ary sintomy izy ireo
Alaharo ireo asan'ny cron mba hijerena ireo fampirimana ary hamaritana rehefa ampiana riaka vaovao amin'izy ireo. Avy eo manomboka manomboka misintona azy ireo ho azy.
Tranonkala ofisialy: http://sourceforge.net/projects/tf-b4rt.berlios/
Farany, mamporisika anao hahita an'ity aho latabatra mampitaha an'ny mpanjifa Bittorrent REHETRA izay misy ankehitriny ataon'ny namana ao amin'ny Wikipedia.
Fuentes: Wikipedia & Rohy Linux
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Mpanjifa Bittorrent ambony 9 ho an'ny Linux
mankafy dia hoy izy:
Mampiasa Ktorrent ^ __ ^
Tsy fantatra # 1 dia hoy izy:
Valiny amin'ny # 1 tsy fantatra
Tsy fantatro izy ... Hitady azy aho! Misaotra tamin'ny vaovao ...
MLDonkey ??? 😀 izay no tsara indrindra, mandeha amin'ny zavatra rehetra!
Eny, tsara izy ireo ...
Gustavo Huarcaya dia hoy izy:
KTorrent sy rTorrent amin'ireo tsara indrindra nampiasako.
Valiny tamin'i Gustavo Huarcaya
nipika6480 dia hoy izy:
ny mahaliana ahy dia ny fahafantarana hoe iza no haingana
Mamaly an'i nipika6480
Adr1one dia hoy izy:
Salama, vao tonga tao amin'ny tontolon'ny Linux aho ary manana fanontaniana amin'ny «Transmission» mpanjifa bittorrent: rehefa manindry ny «rohy magneto» amin'ny tranokala iray aho mba hisintomana andiana rakitra dia tsy haiko ny misafidy ireo rakitra tiako ampidinina ary ireo izay tsy hitako, amin'ny "fananana" dia tsy hitako ireo rakitra izay sintomiko ... Raha toa izany ka nampiasaina alohan'ny nifindrana tamin'ny linux dia nanandrana namoaka ireo antontan-taratasy ireo ihany aho "Utorrent" ary raha afaka mifantina izay tadiaviko aho.
Valio amin'i Adr1one
Heveriko fa tsy manana izany safidy izany ny fandefasana. Angamba ianao afaka manandrana ny Safo-drano na qbittorrent.
Aliana dia hoy izy:
Aleo tara, tara mihoatra ny herintaona 🙂 toy izay tsy mbola nisy.
Ny zavatra momba ny Fampitana sy ny andriamby dia ny mandra-pahatonganao misintona andriamby dia tsy misy rakitra miseho ao amin'ny Properties'io andriamby io.
Tsy haiko raha mitranga amin'ny mpanjifa hafa izany, satria efa nandany ny taona maro aho nandefasana ny Fampitana.
Raha misy olona afaka milaza raha mitranga amin'ny mpanjifa hafa izany dia hankasitrahana ny vaovao.
Ity andriamby ity dia tsy mitranga amin'ny .torrent mahazatra, raha vantany vao apetrakao izy ireo hampidina ireo rakitra samihafa (raha misy mihoatra ny iray) dia hita ao amin'ny Properties an'io .torrent io.
Ny matetika ataoko amin'ny andriamby dia ny mamela azy ireo hidina hidina ary avy eo (rehefa efa miseho ny fisie) dia omeko "Fiatoana", tsindrio marina ny andriamby >> Properties, marihiko izay tiako na tsy hampidina, ny laharam-pahamehana ary / na safidy hafa ary nokapohiko indray ny «Play».
Ho ahy ny fandefasana no tsara indrindra.
Ary ho an'ny ankamaroan'ny disto (manomboka amin'ny Debian), izay ampidiro ao amin'ny zavatra iray ho fenitra.
Valiny amin'i Aliana
ary Tixati no tiako indrindra amin'ny windows sy linux !!!